कतै तपाई पनि ब्लड प्रेसरको शिकार त हुनुभएको छैन ? थाहा पाउनको लागि एक पटक हेर्नै पर्ने भिडियो ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»कतै तपाई पनि ब्लड प्रेसरको शिकार त हुनुभएको छैन ? थाहा पाउनको लागि एक पटक हेर्नै पर्ने भिडियो !
कतै तपाई पनि ब्लड प्रेसरको शिकार त हुनुभएको छैन ? थाहा पाउनको लागि एक पटक हेर्नै पर्ने भिडियो !
By शर्मिला गुरुङ on १५ माघ २०७४, सोमबार १०:२७ भिडियो
तपाइको शरीरको तौल उमेरको अनुपातमा बढी छ ? छ भने हेलचेक्रयाइ नगर्नुहोस् । अनि तपाई धुम्रपान तथा मद्यपान गर्नुहुन्छ भने त झन् खेलाँची गर्दै नगर्नुहोस् । बरु, प्रेसर चेक गराइहाल्नुहोस् । तपाइ उच्च रक्तचापको जोखीममा हुनुहुन्छ ।
सामजिक कार्यमा अग्रसर पेट तथा कलेजो रोग उपचार केन्द्र, पृथ्वीचोकको सहयोगमा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रममा रक्तचापबारे वरिष्ठ पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. सुवास भट्टराईले दिनुभएको परामर्श जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस भिडियोमा: